रासायनिक मल कारखाना : डेढ वर्षभित्र निर्माण शुरू – Newsagro.com :
corporate/ Market Policy
रासायनिक मल कारखाना : डेढ वर्षभित्र निर्माण शुरू
September 2, 2015 NewsAgro0Comments agriculure, Fertilizer Factory, Nepal, Newsagro.com
काठमाडौं, १६ भदौं / अबको डेढ वर्षपछि स्वेदशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना कार्य शुरू गरिने भएको छ ।
कारखाना स्थापनाका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कन सकिएको र आर्थिक प्रस्तावमाथिको मूल्याङ्कन पनि आगामी सातासम्म टुङ्गो लाग्ने भएकाले डेढ वर्षमा कारखाना स्थापना कार्य शुरू गर्न सकिने जानकारी लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन)ले दिएको छ । आर्थिक प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सम्भाव्यता अध्ययन शुरू हुने बोर्डका सूचना परामर्शदाता घनश्याम ओझाले जानकारी दिए । कारखाना स्थापनाका लागि ३ विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमा बेलायती कम्पनी ज्याकोसले कारखाना स्थापनाका लागि दायरा पूरा गर्न सकेन । बाँकी दुई भारतीय कम्पनी इन्फाष्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट कर्पोरेशन लिमिटेड र प्रोजेक्ट एण्ड डेभलपमेण्ट लिमिटेडमध्ये एक कारखाना स्थापनाका लागि छनोट हुने ओझाले बताए ।
सरकारले गत आव २०७०/७१मा २ वर्षभित्र कारखाना स्थापना गर्ने गरी अध्ययनलाई अघि बढाएको हो । कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करीब ९ महीनादेखि १ वर्षसम्मको समय लाग्ने ओझाले जानकारी दिए । झण्डै रू. १ खर्बको लगानीमा स्थापना हुने उक्त मल कारखाना कहाँ स्थापना हुने टुङ्गो सम्भावित अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने लगानी बोर्डले बताएको छ । समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा वर्षेनि उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि लगानी बोर्डमार्फत यस्तो कारखाना स्थापना गर्न लागिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययनपछि मल कारखाना स्थापनाको मोडेल (प्रारूप) टुङ्गो लाग्ने कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. उदयचन्द्र ठाकुरले बताए । विकासकोे पहिलो प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि परेपछि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना बनाउने योजना अघि सारिएको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकास एवम् उत्पादन वृद्धिका लागि करीब ३ वर्षअघि रासायनिक मल कारखाना खोल्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । मल कारखानाको वार्षिक क्षमता करीब ५ लाख मेट्रिक टन हुनेछ । नेपालमा वार्षिक ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । सो मल कारखाना स्थापना भएपछि ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ । देशको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको भन्दै यस क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित सरकारले आव २०५२/५३ देखि रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । बीचका केही वर्ष अनुदान दिन रोकिए पनि २०६५/६६ देखि पुनः सो कार्यले निरन्तरता पाएको छ ।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा रू. ५ अर्बदेखि ६ अर्ब मल अनुदानका लागि दिए पनि सर्वसाधारण कृषकले सहज रूपमा गुणस्तरीय मल पाउन सकिरहेका छैनन् । चालू आवमा पनि सरकारले २ लाख ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीदका लागि रू.५ अर्ब ६६ करोड अनुदान छुट्ट्याएको छ । गतआवमा २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीद गर्न यस्तो अनुदान रू. ५ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको थियो । नेपालबाट मल खरीदका लागि हाल वार्षिक रू. २० अर्बदेखि २५ अर्बसम्म बाहिरिने गरेको छ ।
← यसरी गरौं कुरिलोको खेती
वित्तीय क्षेत्रको कृषिमा रू. ६५ अर्ब लगानी →
यो समाचार 35152 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 34765 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 26080 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 6824 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले